Sultan Qaboos hoggaamiyihii ugu xukunka dheeraa Carabta oo geeriyooday – Hornafrik Media Network
Suldaankii dalka Cuman, Sultan Qaboos bin Said Al Said, oo ahaa hoggaamyihii ugu xukunka dheeraa carabta ayaa geeriyooday saacadihii u dambeeyey ee Jimcihii shalay isaga oo 79 jir ah, waxaana sidaas werisay warbaahinta dowladda Cuman.
Sultan Qaboos ayaa bishii tagtay ka soo laabtay tijaabo caafimaad oo uu ku soo maray dalka Belgium. Waxaa jiray warar sheegaya inuu qabay cudurka kansarka.
Sultan Qaboos ayaa afgambi aan dhiig ku daadan wuxuu xukunka kala wareegay aabihiis 1970-kii, isaga oo taageero ka helaya Britain. Wuxuu kadib isaga oo adeegsanaya saliidda ay qaniga ku aheayd Cuman, dalkiisa ku hoggaamiyey waddada horumarka.
Sida ku qoran xeerka Saldanadda, Golaha Qoyska Boqortooyada oo ka kooban 50 rag ayaa suldaan cusub ku dooran doona muddo seddax maalmood gudahood ah.
Dalka Cumaan ayaa looga dhowaaqay seddax maalmood oo baroordiiq ah oo billaabaneysa maanta oo Sabti ah.